Telecel Archives » Page 2 of 4 » 263Chat, Convening dialogue in Zimbabwe
Shingie Lev Muringi	 Jul 3, 2018
Zimbabwe's leading mobile network operators (MNOs) yesterday complied with a Postal and Regulatory Authority of Zimbabwe (Potraz) directive to slash mobile Internet data tariffs by 60%. Potraz announced last month that it has revised…
Shingie Lev Muringi	 May 22, 2018
The Postal and Telecommunications Regulatory of Zimbabwe (POTRAZ) has instilled a sense of unity and purpose amongst telecom operators in a move set to improve information access across the country's ten provinces. Last week, POTRAZ…
Shingie Lev Muringi	 Apr 10, 2018
The Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (Potraz) has raised the benchmark on mobile network operators NetOne, Econet and Telecel to deliver acceptable quality of services to consumers. The regulator launched…
Zimbabwe On Course To Launch 5G Network – POTRAZ
Shingie Lev Muringi	 Mar 28, 2018
There is an uncontrollable hysteria across the global telecoms community as the world gears up for the arrival of super-fast 5th Generation (5G) networks. 5G is latest next generation network with fierce speeds of up to 20…
#263Tech: POTRAZ Rolls Out Consumer Awareness Campaigns
Shingie Lev Muringi	 Jan 29, 2018
The Postal and Telecommunication Regulatory Authority of Zimbabwe (POTRAZ) has launched countrywide consumer awareness programs focused on educating members of the public on various information communication technology issues. Speaking…
Shingie Lev Muringi	 Jan 23, 2018
The Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (POTRAZ) held its first ever media engagement forum in Kadoma last week Friday where the regulator stressed the need for working relationship with the fourth estate.…